प्रकाश र प्रीतिको दोहोरी ब्याटल [भिडियो सहित] - Naya Patrika
प्रकाश र प्रीतिको दोहोरी ब्याटल [भिडियो सहित]
अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य जगत्मा एउटा स्थापित भनाइ छ,‘कृति लेखिरहँदा मात्र तिम्रो हुन्छ । जब त्यो तयार भएर बजारमा जान्छ, तिम्रो स्वामित्वबाट उम्किसकेको हुन्छ । त्यो त जनताको अदालतमा उभिइसकेको हुन्छ ।’ यो भनाइ त्यतिवेला सम्झना भयो, जतिवेला प्रकाश सपुत र प्रीति आलेको ब्याटल सुनेँ । त्यो पनि र्‍याप होइन, दोहोरी ब्याटल ।
दोहोरीमा ब्याटल सम्भव छ ? अब यसको समीक्षा र फैसला श्रोताले गर्नेछन् । किनकि दोहोरी ब्याटल यतिवेला जनताको अदालतमा उभिइसकेको छ, प्रकाश र प्रीतिको स्वामित्वभन्दा अलग भइसकेको छ ।
उनीहरूको यो दोहोरी ब्याटलले युट्युब ट्रेन्डिङमा जबर्जस्त हस्तक्षेप गर्न थालेपछि मलाई पनि प्रकाश र प्रीतिसँग भेटेर ‘ब्याटल’ गर्न मन लाग्यो । अखबारमा लेख्नका लागि ब्याटल । सायद, मेरो स्वर भएको भए अन्त्यानुप्रयाससहित उनीहरू पनि दोहोरीमै ब्याटल गर्थे होलान् । किनभने स्वदेशी अनि विदेशी थुप्रै मेलामा उनीहरूले लाइभ दोहोरीले हंगामा मच्चाइसकेका छन् । अब नेपाली लोकदोहोरीको क्षेत्रमा अर्को हंगामा गर्दै छन्, यो ब्याटलमार्फत । संगीत उद्योगको क्षेत्रमा यसले नयाँ बहसको थालनी गरेको छ ।
सिटी सेन्टरको चौथो तलामा म उनीहरूसँग ब्याटल गर्ने मुडमा थिएँ । सायद प्रकाश र प्रीतिले मुड बनाउँदै थिए । कालो कफी आयो, मैले प्रश्न तेस्र्याएँ, ‘ब्याटलका पारखीको संख्या सानो छ, त्योभन्दा त बरु लोकदोहोरीकै फलोअर्स धेरै होलान् नि ! अब फेरि यो ब्याटल कहाँबाट आयो दोहोरीमा ?’
जवाफ दिन प्रकाश अघि सरे । उनैको शब्द र परिकल्पनामा आधारित छ, यो ब्याटल । कफीको पहिलो चुस्कीसँगै उनले जवाफ दिए, ‘खासमा युवापुस्ताले लुकेर दोहोरी गीत सुन्नुपर्ने अवस्था छ । के दोहोरी गीत त्यति कुरुप विधा हो त ? मेरो चाहना सहरिया र युवापुस्ताले पनि दोहोरी सुनून् भन्ने हो । र, उनीहरूमा लत बसाउनका लागि एउटा प्रयोग गरेको हुँ । प्रयोग सफल हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । अर्को कुरा दोहोरी आफैँमा ब्याटल हो ।’
लोकदोहोरीको क्षेत्रमा विविध प्रयोग भएका छन् । आज होइन, उहिल्यैदेखि । रोनाधोनादेखि नांगिनेसम्मका प्रयोग । कुलोलाई अर्कोतिर फर्काएझैँ प्रकाशको दिमागले दोहोरीमा ब्याटल रोज्यो ।
मेरो उनीसँग अर्को ब्याटल थियो, ‘तपाईं लोक दोहोरी कलाकारका रूपमा स्थापित बन्नुभएको छ । यो प्रस्तुतिले आफ्नो प्रोफेसनमा सन्तुष्ट नभएर लोक दोहोरीको मर्मबाट भाग्न खोजेजस्तो पनि त देखिन्छ नि !’
प्रकाश अलिकति सैद्धान्तिक धार समात्छन् । उनी साहित्यमा पनि रुचि राख्ने भएकाले यस्ता कुरा गर्न मन पनि पराउँछन् । भन्छन्, ‘मेरो पछिल्लो गीत दोहोरीको मर्मबाट त्यति बाहिर छजस्तो लाग्दैन । संगीत समयको उपज हो । राजनीतिक इतिहास हेर्नुहुन्छ भने पनि कुनै समय बहुदलीय व्यवस्था मन पराइयो, कहिले प्रजातन्त्र त कहिले राजाबाहेकको संघीय गणतन्त्र । समयसँगै संगीतका धार पनि फेरिन जरुरी छ । मेरो यो दोहोरी ब्याटल दुई दिनमै ८० हजारले हेरेका छन् । फेरि कलाकार भएपछि दुईवटा मात्र श्रोता बढाउनु पनि त हाम्रो धर्म हो ।’
नाक छेडेर मुन्द्रा लगाएकी रहिछन्, प्रीतिले । स्टेजमा लाइभ दोहोरीसँगै बेली डान्स गर्नु उनको पहिचान हो । प्रीतिसँग भने मलाई सहकार्यबारे बुझ्न मन लाग्यो । दुवैजनालाई लक्षित गरेर प्रश्न गरेँ यो गीतपछि तपाईंहरूमाथि श्रोताले कत्तिको ब्याटल गरिरहेछन् ?’ जवाफ दिनुअघि प्रीति र प्रकाशका नजर ठोक्किए । सायद निमेषभरमै आँखैआँखाको संवाद भयो । उनीहरूको केमेस्ट्री गज्जबको लाग्थ्यो ।
बोल्ने पालो प्रीतिको आयो, उनले भनिन्, ‘प्रकाश र मेरो लाइभ दोहारी स्टेजमा रुचाइन्छ । त्यसैले केही नयाँ गरौँ न भन्ने लागिरहन्थ्यो । पहिलेदेखि नै सहकार्यमा गीत रेकर्ड गर्ने योजना थियो । त्यो योजनाले अहिले मूर्त रूप लिएको मात्र हो । यो सहकार्य र यस्तै सिर्जना फेरि पनि ल्याउँछौँ । इन्डस्ट्रीका धेरै मानिसले न्युट्रल कमेन्ट गरेका छन् । त्यस्तो ठूलो आक्रमण भएको छैन ।’
प्रीति आले विशेषगरी स्टेज कार्यक्रमबाट उठेकी गायिका हुन् । पोखराको दोहोरी साँझ घन्काउने प्रीतिले तीन दर्जनभन्दा बढी एल्बममा स्वर दिएकी छन् । फुल्यो बामरी, अब हेरी, बेली डान्स, पसिना आ’रैछ निधारैमा, ल्वाङ सुपारी मरिचलगायत गीत गाएकी प्रीतिले प्रजापति पराजुलीको ‘के खान्छौ कमला’ बोलको गीतमा डान्स गरेपछि थप चर्चा पाइन् । स्टेजमा सधैँ गुन्यु–चोलीमा देखिने प्रीतिको लाइफस्टाइल भने अलि मोर्डन खालको नै छ । अहिलेको भिडियोमा त्यस्तै मोर्डन भूमिकामा छिन्, उनी ।
लोकदोहोरी संगीत क्षेत्रमा आज नयाँ प्रयोगमा उत्रिएका प्रकाश एक समय कतारको भिसा लगाउन तँछाडमछाड गरिरहेका थिए । कतारका लागि उनको उमेर पुगेन । उनी खिन्न भएनन् । रेडियो र दोहोरीतर्फको यात्रा तय गरे । फर्निचरमा काम गरेर बाग्लुङ बजारको बसाइलाई योग्य बनाउने प्रकाशको विगतमा पुग्दा अहिलेको स्थान डिजर्भ गर्लान् भन्ने कमैलाई लाग्थ्यो होला ।
अहिलेसम्म उनले दुई सयभन्दा बढी गीतमा मोडलिङ गरेका छन् । आफैँले दुई दर्जन गीत गाएका छन् । लाग्छ, कला त्यस्तो चिज हो, जसले कसलाई कुन वेला कहाँ पुर्‍याउँछ पत्तै हुँदैन ! उनी यस कुरामा भने सहमत छन्, ‘गीत चल्नु भनेको संयोग हो । तर, कला भएका जोसुकै व्यक्ति कलाकार हुन्।’
दोहोरीमा ब्याटलले मात्रै होइन, दसैँ–तिहारलक्षित ‘चरर बरर धरर’ गीतमा पनि प्रकाशको नयाँ प्रयोग पाइन्छ । यसर्थ, उनी सधैँ संगीतमा नयाँ रङको प्रकाश दिने योजनामा हुन्छन् । उक्त गीतमा गन्दर्भको मौलिकतालाई टिप्दै आधुनिक शैलीबाट कुनै ब्यान्डले ‘स्टेज सो’ गरेजसरी कारुणिक प्रस्तुतिमा उत्रिएका छन्, उनी । उनलाई बिदेसिनेको पीडा राम्रैसँग थाहा छ । उनका बुवाले विदेशकै घाममा सेकिएर जवानी सक्काए । प्रकाशले विदेशको पीडालाई गीतमा भावनात्मक बयान गरेका छन् । दसैँ–तिहारमा घर आउन नपाउने परदेशीको पीडा र घरमा श्रीमतीले रोएर बिताउने वास्तविकतालाई मर्मस्पर्शी रूपमा गीतमार्फत पोखेका छन् ।
गीतको संवादको अंश:
श्रीमान् : परदेशको ठाउँमा तानेर ल्यायो कर्मैको डोरीले
आफ्नै बाउ पनि चिन्न पाएनन् छोरा र छोरीले हे मेरी प्यारी, बसिछौ क्यारी, बालबच्चा स्याहारी
छाती चक्र्यो चरर, मोया
आँसु बस्र्यो बरर, मोया
गाउँघर सम्झी रुन्छु म धरर…।
श्रीमती : मनको सुख नहुने रैछ पैसाको बिटोमा
साथैमा भए रमाउन सक्छु आटो र पिठोमा
प्यारो हजुर, सुनकै गजुर, मागेकी काँ छु र ?
हावा चल्यो सरर, मोया
पानी दक्र्यो दरर, मोया
परदेशीलाई सम्झी मन धरर…।।
गीतका शब्द लोकदोहोरीमा नयाँ प्रयोगजस्तो लाग्छन् । उसो त प्रकाशले सुरुमै ‘गरिखान देऊ’ बोलको गीत गाएका थिए । अहिलेचाहिँ उनले ड्रमसेट र गीतार बोकेर ब्याटल हानेका छन् ।
ब्याटल गर्नका लागि हिरोइज्म इन्ट्री, फिल्मी शैलीको प्रस्तुति नै फरकपन हो । आधुनिक ड्रेसमा केटा र केटी एक–अर्कोलाई होच्याउँदै सवाल जवाफमा उत्रिन्छन् । प्रकाश भन्छन्, ‘यो गीतले दिने अर्को सन्देश भनेको युवाले पनि गाउनुपर्छ र गाउन सक्छन् भन्ने हो । हामीले दोहोरीको धारलाई परिवर्तन गर्न खोजेका होइनौँ । मान्यता के मात्रै हो भने, यो सिर्जना हो, सिर्जनामा प्रयोग हुनुपर्छ र त्यो आवश्यक पनि छ । चाहे जोसुकैले गरोस् । फेरि पनि भन्छु, यो दोहोरी गीत नै हो । दोहोरीमा बहस हुन आवश्यक छ । सिर्जना कहिल्यै पनि स्थिर हुँदैन । कसैको बसमा हुँदैन ।’
प्रकाश–प्रीतिको यो गीतले लोकदोहोरीको क्षेत्रमा एउटा बहसको वातावरण सिर्जना गरेको छ । जनताको अदालतमा उभिएर केही प्रश्नको जवाफ प्रकाश र प्रीतिले पक्कै दिनुपर्नेछ । जुन प्रश्न प्रस्तुति, बाजा र मौलिकतासँग सम्बन्धित हुनेछन् । अन्तिममा उनीहरूले यस्तो जवाफ दिए, ‘हाम्रो पोसाक दौरा– सुरुवाल हो भन्दैमा हामी सधँै यसको प्रयोग त गर्दैनौँ नि !’